China ndị na-emepụta ngwa ngwa na ndị na-emepụta | Wangjie
1. ihe: arọ kpara owu
2. Size: Agba okenye (58cm)
5. Mbukota: 50pcs / polybag / n'ime igbe, 200pcs / katọn
6. katọn size ： 60 * 45 * 28CM
Anyị na-ewere "ndị ahịa-enyi na enyi, ndị na-eme ka ọ dị mma, na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe" dị ka ebumnuche. “Eziokwu na ịkwụwa aka ọtọ” bụ ọchịchị anyị maka ezigbo mmeghari ohuru maka China Polyester Sun Visor na Embroidery Customized Promotion Fashion Cap with Top of Hat for Golf, Nabata ajụjụ ọ bụla na ụlọ ọrụ anyị. Anyị ga-enwe obi ụtọ ịmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta azụmahịa na gị!
Ntughari ohuru maka China Polyester Sun Visor na Embroidery na ngwa ahia nke eji eme ya, You nwere ike ịchọta azịza ị ga-enwe na ụlọ ọrụ anyị! Mmadụ Bịa ịjụ anyị banyere anyị ngwaahịa na ihe ọ bụla anyị maara na anyị nwere ike inyere na akpaaka akụkụ ahụ mapụtara. Anyị na-ele anya isoro gị rụọ ọrụ maka ọnọdụ mmeri-mmeri.
Anyị na-enwe obi ụtọ na mmezu ụlọ ahịa dị ịrịba ama na nnabata sara mbara n'ihi nchụso anyị na-agbaso elu nke oke ma ndị nọ na ngwọta na ndozi maka ndị na-ere ahịa ahịa nke China 100% Virgin Material Plasitc Cap Visor, Anyị nọ na usoro maka ihe ndị ọzọ karịa afọ 10. Anyị raara onwe anyị nye ezigbo ngwọta na enyemaka ndị ahịa. Anyị na-akpọ gị òkù ịbịa leta azụmahịa anyị maka njegharị ahaziri iche na ntuziaka azụmaahịa obere azụmaahịa.
Ndị na-ere ahịa na China na ngwa ngwa Visor Hat, ezigbo mma, ọnụahịa asọmpi, ịnyefe oge na ọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Maka ajụjụ ndị ọzọ biko egbula ịkpọtụrụ anyị. Daalụ - Nkwado gị na-akpali anyị mgbe niile.
Ngwaahịa na-agba ọsọ, otu ndị nwere ego, na ngwaahịa na ọrụ dị mma a na-ere ahịa; Anyị anọwokwa na n'otu ezinụlọ buru ibu, mmadụ niile na-arapara na azụmahịa ọnụahịa "ịdị n'otu, nraranye, ndidi" maka China N'ogbe China Bulletproof Visor (NIJ ọkọlọtọ) A pụrụ ịdabere na Ogo, Na-emeri ndị ahịa 'ntụkwasị obi bụ n'ezie isi ọla edo maka ezigbo nsonaazụ anyị! Y’oburu n’inwe obi uto n’ime ngwa ahia anyi, gbaa mbọ hu n’enweghị ikike ịga webụsaịtị anyị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị.
Innovation, magburu onwe ya na ntụkwasị obi bụ ụkpụrụ bụ isi nke ụlọ ọrụ anyị. Thesekpụrụ ndị a taa bụ ihe ndabere nke ihe ịga nke ọma anyị dị ka azụmahịa na-arụsi ọrụ ike na mba ụwa maka Mmepụta Ọhụrụ maka China Ejiji Transparent PVC Sun Visor Cap Clear PVC Visor, Anyị enweghị afọ ojuju na ihe ọ rụzuru ugbu a mana anyị na-agbasi mbọ ike ohuru iji zute mkpa nke ndị na-azụ ihe. N'agbanyeghị ebe ị si, anyị na-ebe a na-eche gị obiọma arịrịọ, na-anabata ileta anyị factory. Họrọ anyị, ị ga - ezute onye na - ebubata ngwaahịa gị.
Ntughari ohuru maka China Sun Visor na PVC Visor price, ugbu a anyị nwere 8 afọ ahụmahụ nke mmepụta na afọ 5 na ịzụ ahịa na ndị ahịa n'ụwa niile. ndị ahịa anyị kesara na North America, Africa na Eastern Europe. anyị nwere ike na-enye elu àgwà ngwaahịa na dị nnọọ mpi price.
Nke gara aga: anwụ anwụ
Osote: 5panels okpu okpu
Ezigbo Sun Visor
Omenala Sun Visors
Okpu Anyanwụ Ememe
Amfụfụ Sun Visor
Girl Sun Visor okpu
Okpu Vintage Sun Visor Hat
pola ajị anụ isi
Acryli 6 Panels snapback Cap
Onye na-azụ azụ azụ na-eme ka azụ azụ ahịa na-edozi ahụ